I-China Fithem Ks-009SBluetooth engenantambo yokudlala imidlalo engenamanzi nabakhiqizi bamahedfoni asekhaya nabaphakeli | Kaiwansi
I-Fithem Ks-009SBluetooth engenantambo yokudlala imidlalo engenamanzi nezindlebe zasekhaya
Ukuqondanisa nomculo omnandi ngenkathi uzivocavoca kungenza ukuzivocavoca kungabe kusaba yisidina. Khetha ihedsethi yezemidlalo ye-Bluetooth engenantambo ekwenza ukhululeke kakhudlwana, ukuze uzwe impilo enethezekile ngesikhathi sakho sokuzilibazisa, futhi ungasusa amaketanga bese ukhipha izithukuthuku zakho kokuqukethwe yinhliziyo yakho. Amahedsethi wezemidlalo anconyiwe namuhla ama-KS-009s, ukuze impilo yakho yezemidlalo ingabi isidina.
I-Chipset I-BES WT230 / BK 3266
1. Umklamo wayo yonke lehedsethi uyasebenziseka kalula, ngaphandle kwamaphiko oshaka, amaphiko endlebe awagcini ngokuthamba nje kuphela kepha futhi asondele kakhulu ekwakhiweni. Ngeke kube khona umuzwa ongakhululekile nhlobo ezindlebeni. Kuyinto ergonomic futhi uzinze kakhulu ukugqoka. Usebenzisa izinto eziqinisiwe, ngeke iwe ngenxa yokuhamba, futhi ibanga elingangeni manzi lolo lwazi yi-IPx5.
2. Ngokuya ngekhwalithi yomsindo, umgodi wensimbi usetshenziselwa ukwenza i-stereo yendawo ivuleke ngokwengeziwe, isixazululo sibaningi kakhulu, futhi imvamisa ephansi inamandla.
3. I-chip esezingeni eliphezulu yokusebenza kwe-Bluetooth version 5.0 chip yenza ukuxhumeka kuzinze, ukusetshenziswa kwamandla okuphansi, ulwazi oluningi, nokulalela izingoma okunembe kakhudlwana.
4. Isigqoko sendlebe sinomsebenzi kazibuthe, ngakho-ke ngeke sibe khona isimo senxeba lapho ucingo lwe-earphone lungasetshenziswa.
Ukupakisha isisindo sevolumu:
1 ucezu / ibhokisi
Usayizi webhokisi: 43 * 27 * 27.5 CM
Isisindo se-NET: 3.8 kg
Isisindo Esisonke: 4.4 kg
6. Impilo yebhethri ende ngamahora ayi-12, futhi awesabi ukuthinta umsebenzi wakho noma imizwa yakho lapho ibhethri liphelelwe ngamandla uma usohambweni lwebhizinisi noma ulisebenzisa!
Langaphambilini I-Fithem Ks-816 engenantambo ye-bluetooth tws headset engaphansi kwe-treble ingenziwa ilogo eyenziwe ngokwezifiso
Olandelayo: I-Fithem ks-011b yomculo ongenamanzi intambo ye-bluetooth entanyeni elenga ihedsethi yokudlala
I-Fithem ks-016 i-wireless stereo neckband bluetoot ...